Su'aal: Ku seexashada barkimo khafiif ah?
Author Topic: Su'aal: Ku seexashada barkimo khafiif ah? (Read 1357 times)
Liban Ali Khataraawi
« on: December 06, 2018, 03:52:42 AM »
Dr in mudo ah waxan isticmala birkin yr o qafif waxan darema madax xanun sidi dawakhad o kale ah. Hurdo badan bn seexda o ila 10 saacadod ah. Hadaan meel kulul istaago ama aan balooni dheelayo waxan darema kul saaid ah iyo dawakh. Mxa sababa bd is ledahay ama talo ah mahadsanid
Re: Su'aal: Ku seexashada barkimo khafiif ah?
« Reply #1 on: March 31, 2019, 11:52:42 AM »
Cilladaadu ma ahan wax barkin ay sabab u tahay, madax xanuun, hurdo xumo, dawakhaad iyo kuleel jirka laga dareemo waxyaabo badan ayaa keeni kara waxaadne u baahan tahay inaad dhakhtar la xiriirtid si laguu baaro, waxyaabaha ugu badan ee keeno waxaa ka mid ah xanuunka gaaska, dhiigyarida, caabuqa jirka IWM.
Akhriso waxyaabaha madax xanuunka keeno: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=298.0
Akhriso waxyaabha hurdo xumada keeno: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=2045.0
Akhriso waxyaabaha dawakhaada keeno: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=6234.0
Akhriso waxyaabha kor-hurka keeno: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=5716.0
Su'aal: Xabad u seexashada caruurta?
Started by TorayoBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 1053 May 06, 2016, 08:58:55 PM